भोलि साउन ९ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस् ….
July 23, 2020 372
मेष – आफ्ना कमजोरीबाट लाभ उठाउनेहरू सक्रिय हुने हुँदा सावधान रहनुपर्ला। आफ्नै बे’होसीले नोक्सा’न पुर्याउन सक्छ। घरखर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउने देखिन्छ। तापनि विदेश भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्ने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौ’डधुप गर्नुपरे पनि मिहिनेतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले फाइदा उठाउन सकिनेछ।
बृष – लाभको अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यको नाफा गुम्न सक्छ। मिहि’नेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। विश्वासपात्रले अन्त्यमा धो’का दिन सक्छन्। शुभचिन्तकहरू’को सुझावलाई बे’वास्ता गर्दा दुस्ख पाइनेछ। पछि फाइदा हुने काम भने प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
मिथुन – कामको सन्द’र्भमा साझेदार व्यक्तिहरूसँग मतभेद देखापर्न सक्छ। तापनि दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। विशेष भेटघाटले अवसर पनि दिलाउनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धे’रैको उपकार गर्न सकिनेछ। सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। अवसरका लागि केही विवा’दास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। महँगा र विलासी साधन जोड्ने समय छ।
कर्कट – विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् भने भाग्यले नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्म’त दिलाउनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। सामाजिक दा’यित्व बढ्नेछ। धेरैले आफ्ना कामको तारिफ गर्नेछन्। भौतिक सा’धन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सफल भइनेछ।
सिंह – पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला। काम बि’ग्रने भ’यले सता’उनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला। आम्दानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ। पछिको फाइदाका लागि केही त्याग वा लगानी गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
कन्या – दिन लाभदा’यक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसि’लो हुनेछ।
व्यवसायमा मनग्गे आम्दानी हुनेछ। तर बेसुरमा दिइएको वचनले सम’स्या नि’म्त्याउन सक्छ। घरायसी आवश्यकता बढ्नाले अर्थ स ञ्चितिमा बा’धा पर्न सक्छ।
तुला – विवाद तथा मु द्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रति’स्पर्धीहरू सजिलै पछि पर्नेछन्। पुरुषार्थले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। रोकिएका काम बन्नाले म’नग्गे लाभ हुनेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। तर गोपनीयता बाहिरिनाले अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुवि’धाले खर्च निम्त्याउन सक्छ।
बृश्चिक – समयले साथ दिनेछ भने प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रो उप’लब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रति’ष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक काम’बाट धनलाभ हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सबल रहनेछ। सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन्।
धनु – आज विशेष वस्तु घरमा भित्र्याउने समय छ, जसले परिवारमा खुसी र उत्साह ल्याउनेछ। केही असमझदारी देखिए पनि टाढिएका आफन्तहरू नजिकि”नेछन्। केही कामको प्रक्रिया दोहोर्याउनुपरे पनि अन्ततस् आफैंलाई फाइदा हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशै’लीमा पनि परिवर्तन आउ’नेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ।
मकर – नयाँ काम प्रारम्भ’ गर्ने समय छ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। पहि’लेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ। दाजुभाइमा आत्मी’यता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिनेछ। व्यवसायमा मनग्गे धनला’भ हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउन सक्छन्।
कुम्भ – केही वि’वादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेत गर्दा फाइदै हुनेछ। बोलीको प्रभावले का’म सम्पादन गर्ने समय छ। लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा पनि निखारता आउनेछ।
तर परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। आलो’चकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला।
मीन – मिहिनेत गर्दा लक्ष्यमा पुगिनेछ। रोकिए’का काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ गर्न सक्छ। भेटघाटले काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ।
समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। आफ्नो सूचना बाहिरिन सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। शं’का गर्ने बानीले काम’मा पछि परिनेछ।
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस् विवरण
Nextआज श्रावण ११ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
तेस्रो बिहे नगर भन्दै
दोहोरी गायिका बबिता बानिया”जेरी” र शंकर क्षेत्रि बने आमाबुवा